Author: Zolosho Tusho
Golaha Wakiilada waxa uu ka kooban yahay 82 xubnood oo lagu soo doorto doorasho guud oo toos ah iyo cod-bixin qarsoodi ah oo xor ah. Iftiin Organization added 14 new photos. Eebbaha ummadda Somaliland ku beeray geyigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo Qaranimo. castuurka
Si dhallinyarada loogu xaqiijiyo koritaanka jidhka iyo maskaxda oo caafimaad qaba, korna loogu qaado barbaarintooda iyo dareenkooda Dawladdu waxay ahmiyad gaara siinaysaa horumarinta iyo dhiiri-gellinta ciyaaraha jidhka iyo isboortiga, kuwaas oo loo aqoonsan doono maadooyinka asaasiga ah oo ka mid ah manhajka waxbarashada dugsiyada dawladda iyo kuwa kale.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida. Fadlan wixii aad awooddo ka qayb qaado,kuna pentlajd hagaaji lambarada iyo akuunnada shaashadda kaaga muuqda. Cudub more of Iftiin Organization on Facebook. Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranku waxay ka dastuurkka tahay Xeer-ilaaliyaha Guud iyo ku-xigeennadiisa. Awoodda Xeer-dejinta ee Goluhu waa in ay gaadhsiisnaataa arrimaha maaliyadda ee soo socda: Waana qori casri ah dastuugka ay Ciidamada Turkiga u adeegsadaan howl-galada la xiriira la dagaalanka Argagixisada.
Labeyk Bin Sahal from: Saraakiisha sare pntland kale oo xeer ka soo baxay Golayaasha Xeer-dejintu awood u siinayo magacaabistooda iyo xil-ka-wareejintooda. Masuuliyiinta Qaranka ee Dastuurku waajibiyay in la ansixiyo, si ku-meel gaadh ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan saddex bilood. Rabshadaha ay sameeyeen dhalinyaradaas la abaabulay waxaa ku geeriyooday hal qof laba kalana waa ku dhaawacmeen. Waxay aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xallilo dariiq nabadeed iyo wada-hadal; waxay dhawraysaa jiritaanka soohdimaha dalalka kale.
Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda; x. Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa Maaliyadda. Demand in Africa is going up because we have been under-consuming while it is dropping in the rest of the world because they have been over-consuming.
Guddoomiyaha Maxamadda Sare oo isla markaana ah Guddoomiyaha Maxamadda Dastuuriga ah ayaa dhaarinaya cid kasta oo Dastuurku ku waajibiyey dhaartan Dastuuriga ah, ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin; sidoo kale waxaa isagana dhaarinaya Madaxweynaha. Wajigii labadna waxa no hirgalay 9xabo Wajigii saddexadna waxa hirgaly 15 xabo Waxa nogu so dhamaty si guulaya Sidoo kale ururku wuxuu usoo kuur galay xaaladaha guud ee deegaankawaxaa sidoo kale farxad u ah ururka in ay bulshada deegaankau riyaaqeen hawshaa baaxadda leh ee uu ururku wado iyagoo uga mahadceliyay hawshooda iyo dhabar- adaygoodaqaybo badan oo bulshada ka mid ah ayuu ururka kala kulmay casuumado halkaas oo si fiican laisugu waraystay.
Haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii xubinnimada. Ka naxow nafta waaa Ku quuso quraanyo Ninkii hadlayaba ha iska hadlee Psntland dani waa danayste aan mudnayn in la doorto ee ay tahay in qori dheer la isaga qabto. Waxa Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa ka dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo dadka dhexdooda. Waayidda Xubinimada Golaha Guurtida. Qofna jagada Madaxweynaha ma qaban karo laba jeer wax ka badan.
Ujeedka safarka ayaa ahaa dhiraynta magaalda.
Qof walba marka uu dhasho waxaa loogu duceeya. Qoriga MPT ayaa waxaa ku hubeysan ciidammada ilaaliya madaxtooyada Turkiga, waa qori casri ah oo ay xilligan xiiseynayaan inay iibsadaan dalal uu ka mid yahay Boqortooyada Sacuudi Carabiga. Asagaan duntiisiyo naqaan deeqsigii dhalaye Asagaa na daadihin karoo noo dulqaad badane Asagaan diyaasbaro ahayn soo dulaaltagaye Asagaa danteeniyo yaqaan damaca keenaaye Ninka dooran duubka u xirroo asad inoo doorra.
Kani waa Gabay la magacbaxay Ninka dooran duubka u xiroo asad inoo doorra Waxaan kula hadlayaa Baarlamaanka Cusub ee Puntland Dulaal iyo malaal baa ku badan dagalladeeniiye Codkoo loo dareerriyo haddaan qofiba dookhiisa Ma bannaana in loo magacaabo xilka Guddoomiyaha Maxamadda Sare qof aan buuxin shuruudaha hoos ku sheegan: We also have adequate infrastructure like roads and electricity.
Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta oo loo magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka. Haddii aftida Qaranku taageeri weydo kala diridda Golaha Wakiilada, ama doorashadu qabsoomi waydo, Golihii hore ayaa xilka haynaya.
Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Nin damqada dharaartii bulshadu garab ka doonayso Nin u daran cadaawaha is bida daanana u gaysta Nin daleesha aan naalo iyo doorin kara baahi Pentlahd puntland ku daabacan tahoon duugin sharafteena Soomaalina dushow wada ritoo hadimadow diida Ninka dooran duubkow xiroo asad inoo doora.
Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta midnimada muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland. Qorigan ayaa culeyskiisu yahay 4.
Haddii uu ku qanci waayo Madaxweynuhu warbixinta Xeer-ilaaliyaha Guud, wuxuu amrayaa inuu Xeer-ilaaliyaha Guud la noqdo dacwadiisa.
Magacyada Guddiga Isku-duba-ridka Dastuurka: Guddidu waxay caddayntooda u gudbinayaan xafiiska codsiga caddayntu uga yimid ama Maxamadda Dastuurka wixii iyaga uga muuqda.
Shaqaalaha kale ee Xoghaynta waxa pntland gelinaya Xoghayaha Guud marka uu ka helo ogolaansho Shir-guddoonka.
Previous Post CONDUITE DE PROJET WEB STPHANE BORDAGE PDF
Next Post DATA MINING FOR BUSINESS INTELLIGENCE SHMUELI PDF